Lozam-pifamoivoizana telo teny amin’ny RN 4: mompera roa lahy avy nanatrika JMJ naratra | NewsMada
Lozam-pifamoivoizana telo, omaly, no nitranga teny amin’ny lalam-pirenena fahefatra izay be fiara mifamoivoy tokoa, noho ny fifaranan’ny JMJ, tany Mahajanga. Mompera roa lahy no fantatra fa naratra tamin’izany.
Fiara manodidina ny 1.500 niainga avy any Mahajanga, omaly maraina, hamonjy aty Antananarivo. Ireo mpizaika namonjy ny JMJ tany an-toerana ireo nanainga ireo. Nisy lozam-pifamoivoizana nitranga anefa omaly maraina, na teo aza ny fepetra sy ny fameramperana nataon’ny tompon’andraikitra amin’ny fitandremana eny amin’ny lalam-pirenena. Fiara telo nitatitra olona no niharan-doza tamin’izany ka naharatrana mopera telo sy vehivavy iray. Araka ny vaovao avy amin’ny mpitandro filaminana, tany Antanambao Antanilava no nitranga ny loza voalohany, omaly tokony ho tamin’ny 5 ora maraina. Tany amin’ny PK31 RN4 mahajanga ny faharoa, tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany maraina. Tany Ambalanjanakomby kosa ny fahatelo farany. Raha ny fanazavan’ny zandary, tsy nisy ny aina nafoy fa ireo olona telo ireo ihany ny naratra. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo mopera roa lahy sy ilay vehivavy iray.
Araka ny fanazavana azo ihany, nametraka olona amin’iny lalam-pirenena fahefatra iny ny avy amin’ny ATT (Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety). Natao hiarovana ireo mpandeha, sy andrindrana ny fifamoivoizana izany. Hahatratra hatramin’ny 7.260 ny isan’ny fiara hihazo an’Antananarivo, hatramin’ny 21 oktobra ho avy izao, raha ny fanisana ataon’ny ATT.
Hampihena ny loza
Amin’ny ankapobeny, fandehanana amin’ny antoandro avokoa ireo nambaran’ny ATT ireo. Manentana ny mpitatitra hatrany mba samy hitandrina sy tsy handeha mafy loatra. Misy ihany koa anefa raha ny fantatra, ny fepetra raisina amin’ny fiara mandeha alina.
Ny fandehanana alina no tena itranga ny loza matetika, na isehoan’ny fanafihan-jiolahy. Hatreto aloha, tsy niseho ny fanafihan-jiolahy amin’iny lalam-pirenena fahefatra iny. Misy rahateo ny mpitandro filaminana miasa. Ny andrasan’ny olona kosa anefa ny hitohizan’ny hetsika fa tsy amin’ny fotoana rehefa misy tahaka ity JMJ ity ihany. Isan’andro ny olona no mila arovana ny ainy sy ny fananany. Eo ihany koa ny fepetra tokony horaisina amin’ny mpamily sy ny mpitatitra minia mandika ny lalàna apetraky ny ATT na ny mpitandro filaminana.